1. Kirismaska, xilliga farxadda leh ee dhammaadka sanadka ee xilliga qaboobaha qabow uu gurguuranayo. Maanta waxaan haynaa menu macmacaan. Taasi waxay ku kordhin doontaa farxad, baashaal iyo diirimaad qoyska aan jecel nahay. Awood u leh in ay isku qaso macaankeeda dhammaan qoyska In la abuuro jawi qurux badan iyo xusuus, oo lagu daray si fudud loo sameeyo, dhadhan macaan iyo qalab fudud oo la diyaariyo. Caadi ahaan waxaa laga helaa dukaamada waaweyn oo leh qaab sameynta shukulaatada kulul, walxo fudud laakiin macaan 1 koob waa diyaar, aan raacno bambooyin shukulaato kulul.
2. Shukulaatada ku dhalaal kuleylka kuleylka yar yar ee kasoobaxa Waa in la jajabiyaa ama loo googooyaa qaybo yaryar si shukulaatada si fudud uga dhalaasho.
3. Diyaarso caaryo silikoon ah, dufan 1 wareeg oo sabdo ama saliid saytuun ah, ku shub shukulaatada la kariyey caaryada. Waxaadna gelisaa qaboojiyaha ilaa 10 daqiiqo si aad ugu oggolaato shukulaatada inay ku qabowdo xabadaha ayna qaabeeyaan hadba sida aan u dooranay. Waxaa badanaa loo isticmaalaa daabacaad wareeg ah. Sababtoo ah waad dhigi kartaa galaas waxaadna arki kartaa wareeg wareegsan oo qurxoon
4. Marka shukulaatada qaabaysan tahay Fur oo soo qabooji. Kadib soo bixi caaryada, tirtir oo ku dar shukulaatada oo sii wad ilaa inta qadarku kafilan yahay.
5. Markuu shukulaatada adkaado Oo hel lambar qanciya Dhex dhig marshmallow. Kadib rooti shukulaatada sare iyo hoose Ku xir wareegga kala-baxa shukulaatada inteeda kale. Ku xardhay qaab quruxsan oo wareegsan Hadana u dhig qaboojiyaha mar labaad, fudud oo ugu muhiimsan, caruurtu waxay jecel yihiin kuna raaxaystaan nashaadaadka ay la sameeyaan qoyskooda, dabcan, waa muhiim sida ugu fudud ee loogu sameeyo bambooyin shukulaatada kulul, qof kastaa wuu samayn karaa, laakiin hawshu wali ma dhamaan. Aynu eegno sida loo cuno si loogu daro macaan iyo diirimaad xilligan Kirismaska iyo Sannadka Cusub.
6. Sida loo cuno bambooyin shukulaato kulul
7. Diyaarso koob qurux badan oo ka weyn bambooyinka shukulaatada ah ee aan diyaarinnay. Haddii la helo jawiga Kirismaska Iskuday inaad dooratid cagaar cusub, casaan dhalaalaya, ama galaas sita calaamadda ciida. Ka dib ku kari caano cusub kuleylka yar, kareyso ilaa inta caanuhu bil bilaabayaan oo qiiq diiran uu soo baxayo. Ku shub caanaha kulul hal galaas bambooyin shukulaato ah. Caano udgoon oo lagu qaso dhadhanka jaalaha ah ee shukulaatada. Markaad cunayso qaaddo Marshmallows ayaa soo bandhigi doona dhadhanka macaan. Iyo dhadhan jilicsan oo calallan Wuxuu dareen diirran ku bixiyaa eray walba
8. Hadiyadaha ugu fiican waa jacayl, diirimaad, iyo joogitaanka qoyska. Hawlo madadaalo wada leh ku qaad fasaxa Sameynta xusuus udgoon macaan Sida loo sameeyo shukulaatada kulul In la sameeyo daqiiqadaha farxadda la diiwaangeliyo inta ugu macquulsan